South Africa Shaqooyinka Dubai ee fursado shaqo ka soo UAE 🥇
Shaqooyinka Imaaraatka Ka Hor tag oo Shaqo ka raadso UAE
Published by Shirkadda Dubai City at January 17, 2018
Shaqooyinka South Africa Dubai iyo Abu Dhabi, naseexooyinka iyo qormooyinka talo bixinta ee loogu talagalay duulimaadyada caalamiga ah. Sida xaqiiqda ah, fursadaha shaqo ee Koonfur Afrika ma fududa in la helo. Si kastaba ha noqotee Shirkadda Dubai City qadada khaaska ah iyo adeeg gaar ah oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya ugaadhsiga. Waxaan hadda u dhaqaaqnaa Koonfur Afrika. Anaguna waan ku faraxsanahay inaan kaa caawin karno in laguu wareejiyo Dubai. Khibradaada shaqo ee nolosha waa mid aad noo muhiim ah. Oo taa waxaa dheer, haddii aad leedahay waayo-aragnimada Bariga Dhexe waxaan jecel nahay inaan adiga kaa maqalno !.
Dhinaca taban aad ayey u xun yihiin fiisada geedi socodka South Afrika. In si fudud loo muujiyo sharcigaas ka mamnuucaya shaqaalaha shisheeyaha inay soo galaan dalka. Waxaad ubaahantahay inaad shaqeyso kahor intaadan imaan South Africa. Xaaladahaas oo kale, shaqo raadinta dadka ajnebiga ah Koonfur Afrika waa mid adag oo aan suurtagal ahayn. Dhanka kale Shirkadaha Dubai hubaal ka dhigida shaqaaleynta South Afrikaanka. Shaqo doon kasta wuu awoodaa ka codso websaydhka oo u dir CV ay iyagu leeyihiin.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad taqaanid ku saabsan Koonfurta Afrika. Gaar ahaan haddii aad tahay qof baadhe ah oo shaqo raadinaya UAE. Dadka reer Koonfur Afrika waa in ka badan lagu soo dhaweynayo Dubai. Sababtoo ah waxay khibrad badan oo caalami ah ku leeyihiin shirkadaha caalamiga ah. Intaa waxaa sii dheer in la haysto aqoon wanaagsan iyo shahaadooyin aad loo aqoonsan yahay. Iyo Dubai City waa booska ugu fiican ee shaqooyinka banaan ee banaan. Markaa hadaad xiisaynayso shaqo hel gudaha Dubai. Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino.
Shaqooyinka South Africa iyo Dubai
Tusaale ahaan, heerka shaqo la'aantu waa mid sareysa Afrika. Dhanka kale Dubai, waxaa jira suuq aad u balaaran oo loogu tala galay shaqo doon. Sababta oo ah Dawladda UAE waxay u qoondeysaa meelaynta muhaajiriinta. Shaqaalaha xirfadda yar-yar iyo kuwa aan xirfadda lahaynba si fudud ayey u iman karaan oo shaqo uga raadin karaan dalka. Inta badan, inta badan Shaqaalaha Dubai iyo maamulayaasha shaqaalaynta waxay door bidaan in ay kiraystaan ​​Koonfurta Afrika ee Dubai.
Sababtaa darteed, dadka reer South Africa waxay raadinayaan habab ku saabsan caqabadahaas. Waxay hadda raadinayaan fursadaha shaqada ee Dubai iyo Abu Dhabi. Waxaan gacan ka geysaneynaa shaqo doonka inay u guuraan magaalada Dubai ee dhanka Africa. Waqti fog, UAE waa meel aad ugufiican xirfada.
Daryeelka caafimaadku waa lacag la'aan Dubai. Isgaarsiinta Shirkadaha ayaa hadda shaqaaleysiiya. Intaa waxaa sii dheer, dalxiiska iyo warshadaha maalgashiga ayaa dhaliya dakhli aad u badan oo maalin walba sii kordhaya. Cusub waxay bilaabaysaa raadinta mashaariicda maxalliga ah Tababaraha kooxda heshiisyo dhaadheer.
Waxaad raadin kartaa goobaha la-talinta ee bannaan oo la xayiray xafiisyada xisaabaadka ee Abu Dhabi. Isla astaamihii, waxaa sidoo kale jira kobcinta suuqa shaqada ee ka mid ah Doorarka sida caadiga ah ay buuxiyaan shaqaalaha caalamiga ah ee Hindiya iyo Pakistan. Ha iloobin in Shaqooyinka Koonfur Afrika ee Dubai ay tahay mowduuca ugu weyn gudaha google cilmi baaris.
Inta u dhaxaysa shaqo raadinta Koonfurta Afrika iyo UAE?
Shaqo raadinta Dubay wuxuu noqday caalamka oo loo yaqaan cibaadaysi. Dhinaca kale, dawladda Koonfur Afrika ayaa gelisay meel dhowr nidaamyo wanaagsan. Badidoodna sifiican bay u shaqeeyaan. Tusaale ahaan Mashruuca Kobcinta iyo Wadaagida ee Koonfur Afrika. Waa mid ka mid ah nidaamyada ugu wanaagsan ee adeegsadayaasha dadweynaha guud. Xilligan la joogo dowladda Afrika waxay xaqiijinaysaa dalka dhaqaalaha ayaa sii kordhaya sanadkasta.
Sidaas darteed farqiga weyn ee cilmi baarista shaqadu waa meel. Tusaale ahaan, qorshaha qurba-joogta ee Koonfur Afrika. Guud ahaan, waxay u baahan yihiin shaqaale xirfad leh oo ajnabi ah leh aqoonsi rasmi ah. Isla mar ahaantaana, ugu yaraan saddex sano oo camali ah khibrad ayaa looga baahan yahay ganacsiga. Asal ahaan kaliya in lagu qoro furaha ganacsi aagagga.
In kasta oo ay tani run noqon karto si aad u kordhiso fursadahaaga shaqo ee South Afrika, waxaad u baahan kartaa khibrado badan. Tusaale ahaan, waad ku dhisi kartaa khibradahaaga shaqo ee Maraykanka, Canada ama Yurub. Dhanka kale UAE in la shaqaalaysiiyo ama meel kale oo bariga dhexe ah. Waad dalban kartaa oo aad heli kartaa waajibaadka khibrada yar. Oo tartiib ah abuurista xirfad aad ku leedahay Dubai.
Koonfur Afrika Shaqooyinka Dubai waxay noqotay mid aad caan u ah tan iyo markii ay koboca ganacsiga ee Imaaraadka Carabta. Dowladda Koonfur Afrika waxay si dhow ula shaqeysaa wakiilo ka socda Bariga Dhexe. Isla mar ahaantaana, waad awoodaa ka raadso shaqooyin deg-deg ah Dubai. sidaa darteed uma baahnid inaad ka welwesho shaqooyin badan oo ka jira Dubai.
Sida loo helo Shaqooyinka Internetka ee Koonfur Afrika?
Ujeedada laga leeyahay raadinta shaqada Afrika, waa inaad diiradda saartaa waxyaabo yar. No.1 waa waaya aragnimadaada shaqsiyeed. Mid kale barta muhiimka ah waa resumeygaaga. Iyo sida ugu adkaa ee ugu dambeeya waa xirfad aad u adeegsan karto lacag. Tusaale ahaan, waxaad ka bilaabi kartaa gurigaaga shaqo raadinta gurigaaga siyaabo badan. Xitaa waxaad ku noolaan kartaa Koonfurta Afrika waxaanna ka shaqeyn kartaa Abu Dhabi. Shaqooyinka internetka, dhanka kale, waxaa laga samayn karaa meel kasta oo adduunka ah.
Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ayaa ah shaqo raadinta matoorrada iyo astaamaha warbaahinta bulshada. Iyagu waa kuwa wanaagsan halka laga bilaabayo raadinta xirfadaada ee Shirkadda Diyaaradaha ee Emirates Airline tusaale ahaan bogga internetka. Si kale loogu dhigo, waxaad ka heli kartaa hay'ad shaqaaleyn wanaagsan. Sababtaas awgeed, waa inaad booqataa websaydhka awoodda, Randstad iyo shirkado kale oo laxiriira shirkado caalami ah.
Mustaqbalka, hadaad yeelato shirkad gaar ah oo aad jeclaan lahayd inaad u shaqeyso. Ama xitaa waxaad leedahay wakaalad shaqaale qorid xiiseynaysa. Ayaa awood u leh inuu ku siiyo shaqooyinka banaan ee internetka. Guud ahaan hadalka fadlan ka fikir inaad u dirto a codsi shaqo oo aad u macquulsan oo ku saabsan moobiilka. Hubso inaad ku dartey macluumaad aad u badan intii aad awooddo oo ku saabsan xaaladdaada shaqo.
Dib-u-dejinta shaqooyinka Gauteng ilaa Abu Dhabi
Waqtigan xaadirka ah wuxuu ku baxaa raadinta shaqo ee UAE. Sida la xusay dadka raadinaya shaqo wanaagsan adduunka oo dhan. Gauteng waa gobol ku yaal woqooyiga Koonfur Afrika. Waxaa jira ku dhawaad ​​Malaayiin Koofur Afrikaan ah nool magaaladan. Ku dhawaad ​​5% dadweynaha ka soo jeeda Magaaladan ayaa jeclaan lahaa inay ka shaqeeyaan Abu Dhabi. Shirkadaha Dubai ee xilliga hadda la baadho murashaxiinta ee Gauteng. Ka dib markii la xaqiijiyo in loo wareejiyo Abu Dhabi.
Qeybta ugu weyn ee shirkadaha Abu Dhabi xiiseynayaan. Waaxaha waaxda IT, HR, iyo waaxaha injineerinka. Aad uma badna loogu talagalay kaaliyeyaasha iibka ama waaxaha suuqgeynta. Sababtoo ah shirkadaha Abu Dhabi ee u kacaya mashaariicda horumarineed ee cusub. Ugu dambeyntiina, musharrixiinta cusub goor dhow ama goor dambe noqdaan shaqaale cusub Abu Dhabi. Ale Gauteng waa 1st ee Koonfur Afrika marka loo eego dadweynaha. Sidaas Abu Dhabi milkiilayaasha ganacsiyada maxaliga ah oo codsiyo badan oo shaqo ah ka helaya magaaladan.
Ku saleysan cilmi-baaristeena ku dhawaad ​​25% wadarta guud Koonfur Afrika dadweynaha. Raadinta Shaqooyinka Pretoria iyo Gauteng. Waxaa jira wararka xanta ah ee Bariga Dhexe in Abu Dhabi maaraynta mashruuca cusub ee Gauteng. Dhanka kale, goobtani sidoo kale waa gobolka ugu dhaqsaha badan shaqaale caalami ah oo caalami ah. Talooyin loogu talagalay Shaqooyinka South Africa ee Dubai ayaa codsanaya shirkado caalami ah.
Isla mar ahaantaana dadkan ganacsi ee khibradda leh koritaanka in ka badan 333% inta u dhaxaysa 1996 iyo 2019. Marka, taa bedelkeeda, qurbo-joog badan ayaa leh a fursad wanaagsan oo aad ku bilowdo shaqo laga bilaabo Gauteng oo u dhaqaaqa Abu Dhabi. Si aan waxba ugu dhicin gobolka ugu weyn gobolka Koonfur Afrika. Inkastoo goobta ugu yar ay u egtahay Abu Dhabi UAE.
Shaqooyinka Durban iyo macluumaad guud oo ku saabsan Career South Africa
Meel kale oo shaqsiyaad jeclaan lahaayeen inay ka shaqeeyaan Durban. Tusaale ahaan, Shaqooyinka South Africa ee Dubia way ka fog yihiin waddankooda hooyo. Marka dadka shaqo ka raadinaya magaalooyinkooda sida Durban. Waxaad isku dayi kartaa sidoo kale inaad ka hesho fursado shaqo oo xiiso badan Durban. Sababtaas awgeed, samee xoogaa baaritaan ah oo ku saabsan shaqooyinka Koonfur Afrika oo dhaqaaq. Si kale loo dhigo, Durban waa badan caan ku ah Dubai. Si kale haddii loo dhigo shaqo ka helidda dekedaha ugu mashquulka badan Koonfur Afrika waa suurtagal.
Dhamaadka Durban waxaa sidoo kale loo arkaa mid ka mid ah xarumaha waaweyn ee dalxiiska. Sidaas qurbajooga raadinta Shaqooyinka South Afrika ee Dubia sababao dhaqameedyada magaalada awgeed. Laakiin waa in lagu xasuustaa taas Kaliya UAE maaha mid kulul. Tusaale ahaan, Durban City waa mid diirran oo leh cimilo aan wanaagsanayn oo leh xeebo aad u ballaaran. Dabcan, waad awoodaa shaqo ka raadsadaan warshadaha Hoteelka halkaas. Sida sawirada laga yaabo in 2015, magaalada Durban waxaa si rasmi ah looga aqoonsaday mid ka mid ah magaalooyinka New7Wonders. Sidaas darteed waa caqli fikradda bilaw shaqo ee magaalada this.
Maxay tahay sida loo shaqeeyo Johannesburg?
Hal wax, oo ka shaqeynaya Johannesburg. Nolosha noloshan magaaladan sida magaalo caadi ah oo ku taala Emirates. In si kale loo dhigo iyada oo la raacayo qaab dhismeedka shaqada ee Dubai ama Abu Dhabi. Magaalada Johannesburg waxaa ku nool dad gaaraya 12.6 milyan oo qof. Laga soo bilaabo halkaas in ka badan 8% waxay leedahay waayo-aragnimo acumen ganacsi. Inta badan dadku waa raadinta shaqooyinka mushaharka badan leh. Magaaladu runti waa midda ugu wanaagsan ee looga shaqeeyo South Afrika.
Johannesburg waa meel fiican, waxaa jira dad badan dadka khibrad u leh waxbarashada tacliinta ee MBA diyaar u ah inay shaqeeyaan. Dhanka kale inta badan muhaajiriinta u guuraya UAE. Shaqooyinka South Africa ee Dubai ayaa aad caan ugu ah shaqo doonka. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Waxaan isku dayeynaa inaan caawinno dad intii karaankeena ah. Gaar ahaan kuwa jeclaan lahaa inay shaqo ka helaan Johannesburg ka dibna ka guuraan Koonfur Afrika ee Shaqooyinka Dubai.
Safaarado kale oo ku yaal Dubai iyo Abu Dhabi
Dubai iyo Abu Dhabi way ka duwan yihiin Koonfurta Afrika. Tusaale ahaan Bariga Dhexe, waxaa jira dad badan qurbajoogta Hindiya. Intooda badan waxay ka guuraan waddankoodii si ay lacag badan u helaan. Isla mar ahaantaana, tani adiga uma fiicna adiga. Adiga daraadaa sidii ugaadhsade shaqo ee Bariga Dhexe. Waxaad u baahan doontaa inaad labalaabto dadaalkaaga shaqo raadinta. Ha iloobin in aysan jirin UAE oo keliya. Waad awoodaa Shaqo ka raadso shirkadaha Sacuudi Carabiya. Waxaa jira shirkado badan oo lagu meeleyn karo.
Mid ka mid ah talooyinka ugu wanaagsan ee aan jeclaan lahayn inaan ku siino si aan kuu caawino. Ma inuu kuu sheego sida aad shaqo uga heli karto Gacanka. Xitaa la'aan u guurista Dubai ama Abu Dhabi. Sida ugu fiican ayaa ah ka raadi shaqooyinka shirkadahayada cryptocurrency. Guud ahaan, tani waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu helo shaqooyinka South Afrika ee Dubai iyo Abu Dhabi. Si toos ah ayaad ula xiriiri kartaa maamulayaasha shaqaaleynta. Intaa waxaa dheer, u dir CV-gaaga cusboonaysiinta. Ka dib la hadal kharashyada kale ee loogu talagalay talo ku saabsan shaqo raadinta.
Bariga Dhexe ayaa aad ugu furan dadka shaqo doonka ah ee caalamiga ah. Gaar ahaan haddii aan isbarbardhigo Afrika iyo Yurub. Magaalada Dubai, waad awoodi kartaa hel shirkadaha shaqaalaynta wanaagsan. Tusaale ahaan, dadka ka soo jeeda Pakistan oo shaqo raadin ka helaya UAE. Gudaha Dubai iyo Abu Dhabi. Sidaa daraadeed waxay noqon doontaa fikrad caqli-gal ah in lagala hadlo dalalka kale ee horay u degganaa Bariga Dhexe.
Shirkadeena ayaa bixisa qorista xirfado ee Dubai. Waxaa intaa dheer, wax badan ayaan qabnaa Xogta ku saabsan Dubai. Sababtoo ah waxaan jeclahay UAE. Bartilmaameedkeenu waa in la dhigo dalxiisayaal badan inta aan awoodno illaa 2020. Sababtoo ah waxaanu jecel nahay inaanu dadka ku caawino.
Raadi shaqo bixiyaha saxda ah ee ka socda Koonfur Afrika
Haa, hadda waa wakhti aad ku hesho shaqo-bixiye sax ah. The shirkadda ugu fiican ee ka shaqeysa Dubai waa Google. Haddii aad leedahay xirfado IT-ga oo fiican oo aad si fiican u yaqaanaan sida loo isticmaalo kumbuyuutarka. Waad sahlan tahay ka shaqayso Dubai shirkado farsamo sare. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa loo shaqeeyeyaal wanaagsan adoo baaraya cidda shaqaaleysiinaysa UAE. Dabcan, maahan hawl fudud. Laakiin inaad sameyso waad awoodaa Ku biir tilmaamaha qarashka ee dadka Koonfur Afrika. Waxa kale oo aad ka heli kartaa qaar ka mid ah shirkadaha kireysiga ee Dubai.
Shirkado wanaagsan oo shaqaaleysiiya shaqaale caalami ah. Guud ahaan waxaad ka heli kartaa meel kasta. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican shaqaaleynta shirkadaha ganacsiga baabuurta waxaad ka heli kartaa goobtayada shaqada. Qof kasta oo shaqo doon ah wuxuu dhahaa shaqooyinka South Africa ee Dubai iyo Abu Dhabi way adagtahay in la helo. Guud ahaan hadalka run maahan. Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad sameyso run ahaantii waa Inaad ogaato sida looga helo Linkedin.
Sida loo helo Shaqooyinka Koonfur Afrika ee Dubai?
Tusaale ahaan, fikrad kale oo akhbaar ah ayaa ah tag oo u gudub wargalin ku socota Dubai. Waxa jira dhowr shirkadood oo ku yaal Imaaraadka Carabta Emirates kuwaas oo shaqaaleysiinaya kun murashax. Helitaanka loo shaqeeyaha saxda ah ee South Africa waxay qaadataa waqti. Gaar ahaan Bariga Dhexe. Tusaale ahaan markaad u guurto Dubai. Waxaad u baahan doontaa ugu yaraan waqtiga 6 bilood si aad u hesho shaqo-bixiyeyaal. Dabcan magaalooyinka, Dubai waa kan ugu fiican. Oo dadkuna waxay jeclaan lahaayeen inay ku noolaadaan oo ay mushahar badan qaataan.
Dhinaca kale, waxaad noqon doontaa dagaal dagaal. Tusaale ahaan mid ka mid ah dalalka ugu caansan ee ah oo ka shaqeynaya UAE waa Filibiin. Waxay yihiin u imow Dubai iyadoo rajo weyn laga qabo inay dhab ahaan shaqo heli doonaan. Xaqiiqdii, waxbadan ayaa jira Dadka ajnebiga ah kuwaas oo aan shaqo helin. Waxay rajeynayaan in taasi aysan ku filneyn in lagu meeleeyo Dubai.
Sidee baa shaqo uga heleysaa Koonfurta Afrika?
Dhinaca xun, waxaan u baahanahay inaan kuu sheegno. Taasi, qof kastaa ma helo shaqo magaalada Dubia ee Koonfur Afrika. Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad lahaato inay shaqo wanaagsan ka helaan loo shaqeeyayaasha UAE. Tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad khibrad fiican u leedahay diiwaanada la xaqiijiyay. Dhamaanteen waan wada ognahay in taasi aysan ahayn hawl fudud in la qabto. Waxa kale oo lagu ogaanayaa in shaqo helista ay tahay waxbarasho wanaagsan. Waxaa intaa dheer, midka ugu fiican wuxuu ka socdaa UAE. Dhanka togan haweeney u dhalatay haweeneyda shaqada ee Dubai waa midka ugu mushaharka badan. Sababta oo ah gudaha UAE waxaa ku yaal hoteello badan iyo shirkado cunto-karin. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, haweenka qurbaha ayaa ah shaqo ka helista UAE.
Dhamaanba macallimiinta Dubai si xawli ah shaqo ayey ku joogaan UAE. Jaamacadaha Dubai had iyo jeer way shaqaaleysiiyaan. Sida aan sheegnay dadka leh waxbarasho tayo sare leh way awoodaan si looga helo shaqo-bixiyeyaasha Dubai. Shirkadda Dubai City waxay kaalmaynaysaa adduunka oo dhan. Laakiin waxaad ubaahantahay inaad lahaato khibrad xoogan si aad u hesho shaqo-bixiyeyaal. Waxaad ka heli kartaa hage la yaab leh shaqada iyo shaqo raadinta UAE. Gaar ahaan shaqooyinka South Africa ee loogu talagalay xirfadlayaal caalami ah.
Waax kale kuwaas oo shaqaaleysanaya Dubai iyo Abu Dhabi. Guud ahaan hadalka ayaa ah Waaxda suuq-geynta suuqa ee Dubai. Gaar ahaan loogu talagalay soo saar 2020 mashaariicda cusub. Waxa jira mashaariic badan oo cusub oo gaar ah oo ka jira waddamada Khaliijka. Adiguna sida shaqo doonka ah ee Koonfur Afrika waad maarayn kartaa si aad shaqo u hesho.
Shaqaaleynta South Africa Shaqooyinka South Africa!
Shaqo qorista UAE
Booqashooyinka Abu Dhabi ee ka socda Koonfur Afrika, dhanka kale, waxaa laga heli karaa caalamka. Tusaale ahaan tan goobta shaqo qorista ee Dubai iyo shirkad talo bixin shaqo. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Soo hel a Shaqada Dubai si la yaab leh waad heli kartaa taas. Sifudud bilow a xirfad cusub Dubai!
Resume Resume oo ah magaalada ugu sarreysa ee aduunka! - Shirkadda Dubai City
Shirkadda Dubai City ayaa sidoo kale bixinaysa hage fiican oo loogu talagalay Shaqooyinka Kuweyt. Kooxdayadu waxay go’aansadeen inay kudarsadaan macluumaad luqad kasta oo loogu talagalay duulimaadyada Dubai. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hada waxaad ka heli kartaa hagitaano Sharjah, tabaha iyo shaqaalaynta ee United Arab Emirates oo leh luqaddaada.